LinkedIn na-ebupụta mmelite nkwado | Martech Zone
Tuesday, August 20, 2013 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Douglas Karr
LinkedIn adịla na-anwale mmelite nkwado na ụlọ ọrụ dị ka Hubspot, Adobe, Lenovo, Xerox na American Express… ugbu a ha mepere ya nye mmadụ niile. Nke a ga - abụ ụzọ dị mma maka ụlọ ọrụ B2B iji chọpụta ma lelee atụmanya anya site na mbọ ị na-agba ahịa ọdịnaya ha n'ime LinkedIn.
uru nke Imelite nkwado LinkedIn
Bulie mmata na ọdịdị nghọta - azịza ahia maka ịbawanye ngwa ngwa na ịchepụta echiche nke akara, ngwaahịa na ọrụ gị.
Ogologo njem na-eduga - Nweta ogo ndu site na ịkesa nghọta ndị ọkachamara na-achọ. Lelee ọdịnaya ahụ na-agbasa site na ịkekọrịta ndị ọgbọ nke na-apụta na LinkedIn.
Nwee mmekọrịta - Kwusaa ọdịnaya gị site na mmelite akwadoro iji mepụta uru ma kwado ntụkwasị obi nke na-eme ka mkparịta ụka na-aga n'ihu yana mmekọrịta ndị ahịa miri emi.
Mmelite nkwado nke LinkedIn na-elekwasị anya na ibe ụlọ ọrụ LinkedIn gị wee hụ na nwee Mbido Companylọ Ọrụ ma ọ bụrụ na i mebeghị ya.
Tags: nkwalite ọdịnayaLinkedInnkwalite nkwado akwadoroakwụ ụgwọ mgbasa oziemelitere nkwado